विवाह अघी गर्भवति हुने बलिउड नायिका कोको हुन? हेर्नुस् के भयो त आखिर? - Filmy News Portal Of Nepal
विवाह नै नगरि आमा वा बुवा बन्ने सपनामा पनि सोच्नुहुन्छ? पक्कै कसैले सोच्दैन । तर समयको परिवर्तन संगै अहिले सिंगल बा वा आमा बन्न थालिसकेका छन् । हाम्रो नेपालमा अझैपनी सिंगल बा बन्न हिचघिचाएतापनी बलिउडमा भने कैयौ सेलिब्रेटी विवाह नगरी सन्तानका एकल आमा वा बुवा बनेका छन् । एकता कपूर, उनकै भाई तुसार कपूर, करण जौहर आदि एक उदाहरण हो । उनीहरु सेरोगेसीबाट सन्तानका मातापिता बनेका हुन् ।
सेरोगेसी बाट सिंगल बुवा वा आमा बन्नु हाम्रो समाजको लागि खासै ठुलो आश्चर्य नभएतापनी विवाह नै नगरि गर्भवति हुनु अपाच्य न हुन्छ । जबकी थुप्रै बलिउड अभिनेत्री प्रेम सम्बन्धमा रहेका बेला गर्भवती भएका थिए ।
यसको सिलसिला श्रीदेवीबाट सुरु भएको हो । श्रीदेवीको केही बर्षअघि निधन भइसकेको छ । अहिले उनकी छोरीलेपनी बलिउडमा पाईला टेकेकिछिन । उनै श्रीदेबी विवाहअघि नै उनी गर्भवती भएकी थिइन् । उनले बोनी कपुरसंग विवाह गरेकी हुन् ।
बलिउडमा परदेश फिल्मबाट करियर सुरु गरेकी महिमा चौधरी पनि विवाह अघी गर्भवति हुने नायिका मध्य अर्की हुन् । महिमाले अचानक बबी मुखर्जीसँग विवाह गरिन् । उनले हतारमा विवाह गरिन् । उनले हतारमा विवाह गर्नुको राजा खोताल्दै जादा उनी विवाह अघी नै आमा बन्न लागेको खवर बाहिर आयो र उनी एक छोरीकी आमापनी बनिन् ।
अमृता अरोरा बलिउड अभिनेत्री, मोडल तथा टेलिभिजन प्रस्तोता हुन् । अर्कोतर्फ उनी मलाइकाकी बहिनी हुन् । भनिन्छ, अमृताले जतिबेला विवाह गर्दै थिइन् त्यसबेला उनी गर्भवती थिइन् । मलाइकाले व्यवसायी शकीलसँग विवाह गरेका हुन् । प्रेम सम्बन्ध रहेकै बेला उनी गर्भवती भएकी हुन् । विवाह भएपछि उनले खुलासा गरेकी थिइन्, ‘म आमा बन्नेवाला छु ।’